Best Online Free Courses in Myanmar - Myanmar BOC
ကြိုက်တဲ့အချိန် ကြိုက်တဲ့နေရာ ကျွန်တော်တို့ MyanmarBOC Website မှာ Best Online Free Courses များကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေးမည်သည့် Devices နှင့်မဆို ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ သင်ခန်းစာများ
သင်ခန်းစာ အားလုံးကြည့်ရန် >
1 ပထမဦးဆုံး နှင့် တစ်ခုတည်းသော
ပထမဦးဆုံး နှင့်တစ်ခုတည်းသော မြန်မာဘာသာဖြင့် best free online courses videos များကိုစနစ်တကျ စုစည်းတင်ပြထားသည့် online education portal တစ်ခုဖြစ်သည်။
2 ကြိုက်တဲ့အချိန် ကြိုက်တဲ့နေရာ
Myanmar BOC website မှာ free online courses videos များကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး မည်သည့် deviceနှင့်မဆို ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
MyanmarBOC for business
ကျွန်တော်တို့ MyanmarBOC Website မှာ Best Online Free Courses များထည့်သွင်းခြင်း၊ လူကြီးမင်းတို့၏ ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်ပြီး Website များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကျွန်တော်တို့ Website တွင် ဟောပြောပွဲ အကြောင်း ကြော်ငြာထည့်ခြင်း၊ ကိုယ့်ရဲ့ Company အကြောင်း ကြော်ငြာထည့်ခြင်း၊ Event တစ်ခုခုအကြောင်း ကြော်ငြာထည့်ခြင်း စသည်တို့ကိုဆောင်ရွက်လိုပါက MyanmarBOC ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
** တကယ်ကောင်းတဲ့softwareပါ။ဒီsoftwareကြောင့်ကျတော်ပညာရပ်အများစုကိုပိုက်ဆံမကုန်ပဲတတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ကျောင်းသားတွေ အခြားပညာရပ်လေ့လာသူတွေအတွက် တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဒီsoftwareဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့Developerများကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် **
**စာလုပ်ဖို့ပျင်း​​နေတဲ့ ကျွန်​တော့်ကို စာလုပ်ချင်​အောင် တွန်းအား​ပေးတဲ့ app လေးတစ်ခုပါပဲ။ ဘာမဆို စပ်စပ်စုစုလိုက်သင်ချင်​နေ​တော့ lesson တွေ course တွေ တစ်​နေရာတည်း စုထား​​ပေးထား​တော့ အရမ်း​ကောင်းပါတယ်။ ကျေးဇူးပါဗျ⚘❤**
**Great App For Learning. Very Conveniant And Useful. UI Is Simple And Easy To Use As Well. Great Job Devs.**
**Really great app for learners who would like to study online.. simple n qualitative interface.. please update more courses.. Thanksalot to all developers n creators! 🙏🏻**
**I like this app.It is very useful for me.I can learn languages and operation business knowledge .Thank you**
***အရမ်းကောင်းတဲ့ software လေးပါ အရမ်းလဲသဘောကျတယ် ကျေးဇူးလဲတင်တယ် ကျွန်တော်ကလူကြားသူကြားသွားရမှာအရမ်းရှက်တာ သင်တန်းတွေတက်ချင်ပေမဲ့ မတက်ခဲ့ရတာတွေအများကြီး ခုလိုလေးလုပ်ပေးတော့ တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ် free တွေဆိုတော့ သာဓုပါ ပညာဒါနလေးပေးတဲ့အတွက် ☺ အမြဲအားပေးနေမှာပါ*
မြန်မာနိုင်ငံမှလေ့လာလိုသူတွေ ပညာရေးကဏ္ဍပိုမိုမြင့်မားအောင် နှင့် ကျွမ်းကျင်သူများထံမှ တိုက်ရိုက် နည်းစနစ်ကျကျ သင်ကြားနိုင်အောင် myanmarboc.com မှ online learning marketplace တစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းလေး တစ်လုံးရှိရုံဖြင့် online ပေါ်ကနေ အခမဲ့ training videos များကို လေ့လာနိုင်ပါပြီ။
Myanmar Best Online Courses
ကျွန်တော်တို့ရဲ့Online Education Platform နှင့်ပူပေါင်းပြီးမှ